A Wanderer's Notebook: မပို့ဖြစ်သော သိမ်းထားသည့်စာတစ်စောင်
Posted by Aung Phyoe at 23:09
ရှားစ ပါးစ လေး မို့ တကူးတက လာဖတ်ရ ပါတယ်..ကျတော်ရေ..း)
လူအချင်းချင်းသနားတာဟာ လူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာပဲ ငါသူတို့ထက်သာတယ်ဆိုပြီး မဏ္ဍပ်တိုင်တတ်ပြ တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလား ..ဟင်။ ကိုယ့်ထက်နိမ်ပါးလို့ပဲ သနားကြတာမဟုတ်ဘူးလား ကျတော်ကတော့ လူတစ်ယောက်ကို သနားညှာတာရမှာ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုရှက်မိတယ်
အဲဒီ သဘော ကို..တို့ မိသားစု မှာ..အဖေက ငယ်ငယ်လေး တည်းက.. သွင်းပေး ခဲ့တယ်။ တို့ကလည်း ရွတ်ပြီး..သူတောင်းစား မသနား ရဘူးလား လို့.. လုပ်ခဲ့ တယ်။
စာလုံး တွေ နဲ့..ကင်းလွတ် လို့ မရ တဲ့ လောက မို့.. အမြဲတမ်း မမှန်တဲ့.. အမှန် တခု ပါပဲ။
တို့လည်း.. လက်ထပ် လက်စွပ် ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် လေးလေးစားစား ၀တ်ထားတဲ့..အမျိုးသား တွေ ရဲ့ လက်တွေ ကို..အမြဲ စိတ်ဝင်စား တယ်။
ကံကောင်းချင်တော့..တို့ အမျိုးသား ကလည်း..လက်စွပ် ကို..ရေချိုးတောင် မချွတ်ဘူး။း)
အင်း..ပျင်းရိအောင် မပေါင်းသင်းချင်လို့.. ဇတ်လိုက်ကို သတ်ပြစ်မဲ့..စာရေးဆရာ ကျတော် ကိုတော့..အနည်းငယ် လန့်ပါတယ် ဗျာ..။ :D
13 October 2011 at 17:26
အတ္တသိပ်ကြီးသွားလို့ ထင်ပါရဲ့ မကေ :)
အမြဲတမ်း မမှန်တဲ့.. အမှန် တခုကို ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ တွေးမိကျင့်သုံးမိနေတာမဟုတ်ဘူး လို့ သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
Good post. I hope you won't take my comment as asahuman-right abuse. :-)